तपाईले ,सधै बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > तपाईले ,सधै बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा !
तपाईले ,सधै बिहानै खाली पेटमा बिरे नुन पानी पिएर त हेर्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ नतिजा !
admin November 17, 2021 November 17, 2021 जीवनशैली, स्वास्थ्य 0
एजेन्सी । यदि तपाई स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउन सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईको ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसर, उर्जामा सुधार, मोटोपन जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याबाट छुटकारा दिने गर्दछ। बिरे नुनमा ८० प्रतिशत खनिज र जीवनका लागि चाहिने सबै आवश्यक प्राकृतिक तत्व पाइने गर्दछ।
पाचन प्रणालीमा सुधारः बिरे नुनको पानीले मुखमा आएको लारवाला ग्रन्थिलाई सक्रिय रहन मद्दत गर्दछ। राम्रो पाचनका लागि यो पहिलो कदम निकै जरुरी हुन्छ। पेटभित्र प्राकृतिक नुन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड र प्रोटीन पचाउने इंजाइमलाई उत्तेजित गर्नमा सहयोग गर्दछ। यसले खाएको खानालाई आरामले पचाउन सहयोग गर्दछ।
तौल घटाउन मद्दत गर्छः कालो नुनले तौल घटाउन पनि मद्धत गर्छ । शरीरमा पाचन प्रक्रिया ठीक हुन्छ भने खानामा भएको पोषक तत्व शरीरले राम्ररी लिन पाउछ । स्वादिलो हुने भएकाले यो नुन निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।त्यसका लागि एक गिलास पानीमा एउटा कागती निचोरेर हाल्ने र स्वाद अनुसारको नुन मिसाउन सकिन्छ । गर्मीका बेला तिर्खा लाग्दा दिनको तीन चारपटक बिरे नुन खान सकिन्छ ।
मधुमेहमा उपयोगीः बिरे नुनमा सोडियम कम हुन्छ । यसले ब्लड सुगरलाई नियन्त्रित गर्छ । यसैले मधुमेहका बिरामीका लागि कालो नुन उपयोगी हुन्छ । मधुमेह सुरुवाती अवस्थामा छ भने त बिरे नुनको प्रयोगले ठीक पनि हुन सक्छ ।
जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्दाः मांसपेशी र जोर्नी दुख्दा बीरे नुनले सेक्ने हो भने निको हुन्छ । कपडामा थोरै नुन बाँधेर यसलाई तातो बनाएर दुखेको ठाउँमा दिनको दुईपटक सेक्ने हो भने तत्काल राहत मिल्छ ।
त्वचाको समस्या हटाउछः बिरे नुनमा पाइने क्रिमियमले सफा र कोमल त्वचा बनाउन सहयोग गर्दछ। यस बारेक बिरे नुनको पानी पिउदा छालाका विभिन्न समस्या हट्ने गर्दछन्।
Black SaltHealthRock Salt
कलीको मुर्ति पुरै निस्किएपछि यो संसार नै ध्वस्त हुने कथनको सत्यता के हो?